Iseshini Yokuphulukisa Ekude – Ukwelashwa kwebanga elinamandla – nge-Jucelino da Luz 26th. Juni 2022 – JucelinoLuz
Iseshini Yokuphulukisa Ekude – Ukwelashwa kwebanga elinamandla – nge-Jucelino da Luz 26th. Juni 2022
❤ Ngenzelwe nina nonke bangane abathandekayo ❤
Iseshini yokuphulukisa kude NoJucelino da Luz
Siyajabula ukukutshela ukuthi manje ikhalenda lakho liku-inthanethi ❤
UJucelino da Luz naye ungomunye wabelaphi bokomoya abadume kakhulu baseBrazil. Usebenza ngamandla angokomoya we-cosmic emsebenzini wakhe wokuphulukisa futhi wenza imisebenzi enomdlandla (ngaphandle kokungena emzimbeni). Usevele welapha abantu abangaphezu kwezigidi ezimbili eBrazil nasemhlabeni wonke.
Kusukela eneminyaka engu-9 ubudala, ubelokhu ethola amandla okuphulukisa ngaye, awadlulisela ngezandla zakhe, ukuthinta umuntu, noma kude, futhi imiphumela iyamangalisa. Akekho kule planethi ongenza okufana naye naphezu kokuthi “isipho “esamukelwe futhi sanikezwa uMkhathi Ophakeme. (UNkulunkulu uSomandla). Lokho kusho ukuthi ngeke kwamukelwe, kudluliselwe noma kudluliselwe komunye umuntu.
Ngisho esemncane, abantu bathutheleka bezomhlangabeza futhi welapha abantu abangaba ngu-600 ngosuku olulodwa.
Idumela lakhe njengomelaphi lisemazweni omhlaba futhi amaJapan ambheka njengomkhulu kunabo bonke.
Iqiniso lokuthi ukwelashwa kwakho kwenzeka kude aliguquli amandla awadluliselayo!
Futhi abantu abangu-60% bathola Amandla ekwelashweni kokuqala, futhi u-40% uzodingeka ukuze uqedele umbuthano wemithi eyi-10 ( eyishumi ) ubuncane ukuze uzwe imiphumela futhi.
Wonke amaklayenti ethu, ngemva kokuphuma kwamaseli wamandla, azothola koxhumana nabo abahlinzekiwe, ukuqondiswa okungokomoya kokwelashwa okwenziwe.
Nasi isixhumanisi sokuthola lolu lwazi:
Umbhalo wakho uqondile nethimba likaJucelino Luz ngale imeyili: jucelinoluz44@gmail.com
Thumela isithombe sakho (noma ubani ozokwamukela amandla aphezulu aphezulu e-Universy), igama eligcwele, isicelo sakho se-26. Juni 2022
thumela ndawonye intela yokubhalisa ( okubhaliwe ) 70 Euros noma idiphozi ngqo ( Kunamafomu amathathu okumelwe uwadlulisele ) :
A) I-Paypal: jucelinoluz1@gmail.com
B) ukudluliswa kwe-akhawunti: Santander Bank
Inombolo ye-akhawunti ye-Ejensi 0672: 01015313-7
Ivuna uJucelino Nobrega da Luz
C) Nge-pix: 5519996793343
Izincwadi ezintsha ezishicilelwe – ama-eBooks ngezilimi ezingama-46
Ungabelana nabangani kanye NakumaQembu Omphakathi wakho.
Ukhokha ama-Euro angu-3 kuphela futhi uthole nge-imeyili yakho nge-PDF noma i-PUB, ukukhetha kwakho – thumela i-oda lakho nekhophi yerisidi lokukhokha + inketho yolimi. (zingakapheli izinsuku ezinhlanu (5) zizothunyelwa ku-imeyili yakho (ukuqinisekisa ukusetshenziswa kwayo ekufundeni kulabo abakhokhayo – sikhumbula ukuthi zonke izincwadi ezishicilelwe, zivikelwe yilungelo lobunikazi (ukungakwazi ukuphinda futhi noma ukusebenzisa okuqukethwe, ngaphandle kokudlule veza ukugunyazwa, kombhali wencwadi ye-elekthronikhi).
Izingqungquthela ezintsha ze-Jucelino Luz zango-2022
( Abahleli – abathintwayo abazobhaliswa – sebeyamenyezelwa)
Agasti/2022 – Germany
Septemba / 2022 – Sweden / Switzerland
Okthoba / 2022 – France / Poland
Novemba 2022 – Bulgaria
Izincwadi zikaJucelino Luz & Herbs
I-CAIXA POSTAL 2143
Oxhumana nabo : umakhalekhukhwini +55-62-982006505
Uma unendawo yokwelapha, isikhungo semimoya, uyingxenye yomphakathi wenkolo, ophelele, wefilosofi, iqembu lokuvikela imvelo (imvelo), futhi ungathanda ukusa uJucelino Luz emhlanganweni noma izifundo ezweni lakini, xhumana nathi ukuze uthole okwengeziwe. imininingwane (itholakala kuphela ngo-2023): jucelinoluz44@gmail.com
Buổi chữa bệnh từ xa – Điều trị năng lượng từ xa – với Jucelino da Luz lần thứ 26. tháng sáu năm 2022
远程治疗会议 – 远程能量治疗 – 与朱塞利诺·卢兹2022年6月25日